Halkani waa Qaranka ugu xoriyada badan dunida!
Soo galooti lagu qiyaasay 20 Million ayaa ku nool waddankan mareykanka. Sida dowlada mareykanku aaminsan tahayna, dadkani intooda badani "xoriyad la'aan" ayeey ka soo carareen. Madaxweynaha imminka talada u haya mareykanka, Mr Bush, Shalay ayuu ka dhex khudbadeeyey meel eey isugu yimaadeen boqolaal ciraaqiyiin ah. Marka uu sida tooska (Live) uga hadlayey idaacadaha la iska arko/maqlo ee caalamka, waxaa gadaashiisa laga dheehanayey wadaad shiica ah iyo gabdho xijaaban. Sawirkani wuxuu ahaa mid u baahan in la kor istaago.
Maanta ayeey maxkamadda sare ee mareykanku go'aamisay in "qofka aan dhalashada waddankan heysan la heyn karo muddo aan cayineeyn, inta laga xukumayo ama la musaafurinayo" Hadalkani wuxuu waran wadna-qabad ah ku noqday malaayiin soo galooti ah oo aan heysan dhalashada waddankan. Tan iyo markii uu soo baxay sharicigii "Patriotic Act" ee u fasaxayey dowladda dhexe ee mareykanka ineey si qarsoodi ah u xiri karaan dadka "khatarta ku ah" amaanka qaranka ee waddankan, waxaa sii badanayey cabsida dadka soo galootiga ah. Sharcigaas dabcan waxaa lagu soo saaray laguna fuliyey dad muslimiin ah. ilaa iyo haatan lama hayo qof diin kale heysta oo lagu fuliyey. Midka maanta soo baxeyna wuxuu noqon doonaa mid dhabahaas qaada.
Dad badan ayaa is heybinaya: Tolow meeday xoriyadii mareykanka lagu sheegi jiray? Mareykanka oo isku naaneysa "Dimoqoraadiyada ugu faca weyn dunida". Laakiin wuxuusan shaki ku jirin in mareykanku uusan isticmaalin "Xoriyada " si furan. Waxaan ula jeedaa si aan xadidneyn. Micno kale, Taariiqda waddankan hadii aan waxyar dib ugu laabanno, Markii uu socday dagaalkii labaad ee Dunida, dadka u dhashay Japan ee mareykanka ku noolaa oo idil xabsi baa lagu xaabiyey " illeyn amaanka qaranka ayeey khatar ku ahaayeene" ! Maanta, kumanaan Ciraaqiyiin ah ayeey dowladani wareysi la yeelatay " si eey uga dhex hesho dadka xun xun". inkabadan 8 caruur ah oo da'adoodu ka yar tahay 16-na waxaa lagu heystaa xabsiga la fogeeyey ee Guantanamo Bay ee lagu xiro maxaabiista "Al-Qacida". Sababta Mareykanku caruurtan u xirayna waxaa sheegay Waziirka mayalka adag ee difaaca, Mr Rumsfeild " Inkastoo eeysan qaan-gaar aheyn, Haddana waa dad xunxun" Isagoo hadalkiisa sii wata todobaadkii horena wuxuu raaciyey " Sidaas awgeed, waxaanu ula dhaqmi doonaa sida dad qaan-gaar ah"! Intaas kaliya ma'ahane, waxaa jira mutacalimiin iyo ganacsato muslimiin ah oo laxiray dhowrkii bilood ee ina dhaaftay, iyadoo lagu eedeynayo ineey "argagixisada xiriir hoosaad la leeyhiin". Waaxda dhexe ee Baaritaanada (FBI)-dana waxaa loo ogolaaday ineey dhageysan karaan taleefoonada iyo siraha "dadka eey ka shakiyaan". Dhamaan ardayda iyo dadka aan Visooyinka qaxootiga ah heysanin ee ka socda inta badan caalamka islaamka/carabtana waxaa laga doonayaa ineey iska soo diiwaan galiyaan xafiisyada socdaalka marka eey yimaadaan.
Gabagabadii, Muslimiinta mareykanka ku nool oo lagu qiyaasay ineey yihiin ku dhawaad 8 Million - Soomaaliya tiradeeda oo kale- ayaa la dhihi karaa ineey ku dhex nool yihiin xabsi kor ka furan! Muslimiintan oo dhegaha ka maqla ineey ku nool yihiin dimoqoraadiyada ugu faca weyn dunida, hooygii xoriyada iyo dhulkii fursadaha ayaa marka eey guryohooda tagaan wexeey idaacad walba ka maqlaan "Argagixiso Muslim ah" ama " Muslimiin doonaya in diinta islaamka wax lagu dhaqo" ama " Qarax imminka dhacay ayaa loo maleynayaa ineey ka danbeeyaan muslimiinta xag jira" Marka qaraxaas la sii baarana waxaa soo baxda natiijo cajiib leh= (Timothy McVeigh) (Qarxiyihii Oklahoma City) iyo wax lamid ah. Reer galbeedka kale woxoogaa weey dhaamaan intaas. Walow eey dowladda Ingiriisku dhalashadii ka xayuubisay Abu-Xamza Al-misry oo ah wadaad ka khudbeyn jiray masaajidada London. Dhalinyarada soomaaliyeed ee u soo socda mareykanka waxaan oran lahaa: Xoriyad idinkama soo horeysee, dano kale u imaada mareykanka.
KAYDKA QORAALADII HORE EE CEYNTE.... GUJI
��DUMARKUNA U ROONAA !!!!
��Afhayeen-nimada Jaamac Cali jamac ee SL.
��Wariyaha Soomaaliga ah mabda� maleeyahay?
��Maamulada Maxlalka u ah Maqale
SIDEE LOO BIXIYAA SAKADA MAALKA